Ukubala owona mkhulu ekudlalweni kweNdebe ye-Ryder, ukusuka kwiNombolo 10 ukuya kwiNombolo 1
Ngubani na owona golisa obalaseleyo kwimbali ye- Ryder Cup ? Asitsho ukuba abadlali begalufa abaphambili badlale kwiNdebe ye -Ryder; Sithetha into efanelekileyo kwiNdebe ye -Ryder - abo ba golisa abagqwesileyo kwisigaba esikhulu se-USA kunye nemidlalo ye-Europe. Nazi iipokethi zethu, ukuqala nge-10 ye-golfer kunye nokubala ukuya kwiNombolo 1:
UNick Faldo, iQela leYurophu
Steve Munday / Getty Izithombe
Kukho uninzi lwabaviwa abakhulu esingabafaka apha esikhundleni sikaNick Faldo : uBernhard Langer , uBilly Casper , uLee Trevino , uGen Littler kunye nabanye abaninzi abafanelwe ukucingisisa. NoLuka Donald.
Kodwa sahamba no Faldo ngenxa yokuba waqhayisa umgca omkhulu wegalufu waseYurophu xa eqala ukudlala ngo-1977, ngenxa ye-6-4-1 yokurekhoda kwayo, kuba ubamba iirekhodi ze-Ryder Cup kumanqaku amaninzi amanqaku (23), amaninzi amanqaku adlala (46) kunye neyona mininzi yeCape (11). Ipesenti yayo yokuphumelela jikelele - .543 (23-19-4) - ilungile kodwa engekho phakathi kweyona nto ibhetele. Kodwa kukho into enokuthiwa ngokubonisa rhoqo ixesha kunye nokugxotha amaphuzu kwicala lakho.
USergio Garcia, iqela laseYurophu
UGarcia ungomnye wabadlali ababini abakhulayo kwiluhlu lwethu, kwaye wahamba ngo-2-1-1 ngo-2014. Le nto yenza ukuba irekhodi lakhe libe li-18-9-5 (iipesenti ezingama-64.1), phakathi kweyona nto ibhetele. UGarcia, ngokumangalisayo, akenzanga kakuhle kwii-singles, elahlekelwa ngaphezu kokuwina, kodwa waphumelela ngo-2014 ukuphucula u-3-4-0.
I-Doubles apho uGarcia ehamba khona: 9-2-2 kwiimine ezine kunye no-6-3-3 kwiibhola ezine . UGarcia wahamba u-3-1-1 ekuqaleni kwakhe ngo-1999 (apho wabeka irekhodi yeNdebe yomdlali omncinane kuneminyaka eli-19) kunye no-4-0-1 ngo-2004.
Arnold Palmer, i-Team USA
U-Arnold Palmer (ochazwe ngo-1973) wafika ngokukhawuleza kodwa akazange alwe nePGA Championship. Don Morley / Getty Izithombe
Kukho iimbandezelo ezimbalwa kuloluhlu, kwaye u- Arnold Palmer lo ophantsi ungomnye wabo. Emva koko, uKumkani uye, ngokuqinisekileyo, irekhodi enkulu ye-Ryder Cup xa ekhangele ngokukhawuleza kumanani: Ngexesha lokubonakala kwakhe kokugqibela, wabamba iiRekhodi ze-Cup ze-Ryder zokudlala amaninzi amanqaku, amanqaku amaninzi aphumeleleyo, ipesenti eziphumeleleyo, kunye wabelane nabanye abaninzi. I-Palmer isineyona nto ibhalwe phambili-22-8-2, .719 - phakathi kwabo bonke abantu baseMelika abanomdlalo osishumi eli-15 odlalwayo.
Izinto ezintle! Kodwa yile nto into: I-Great Britain / Great Britain ne-Ireland amaqela ePalmer atyhulwa kwiminyaka yama-1960 nakwiminyaka yokuqala yee-1970 yayingekho ndawo kufuphi neYurophu yanamhlanje. Ingxelo evelele yePalmer yahlanganiswa kumgangatho ophantsi wokukhuphisana. Kuyinyaniso kuwo onke amarekhodi evelele aseMelika Ryder Cup aqulunqwe ngaphambi kokuba iNdebe ikhuliswe ukuze iquke yonke iYurophu. I-Palmer yayisadingeka ibethe i-boy (s) yayifana nxamnye nayo, kwaye ngokuthe gqolo kunokuba yenzanga. Kodwa kufuneka sicinge ukuba i-Palmer ibhekane neenkcaso ezibuthathaka ngakumbi kunamanje we-Ryder Cuppers.
UPeter Oosterhuis, iGreat Great Britain / iGrithani neIreland
UPeter Dazeley / Getty Images
I-Palmer yayineepesenti eziphumelelayo ezingama-71.9, i-Oosterhuis nje ngama-55.4 ekhulwini. Sekunjalo sineOosterhuis phambi kwePalmer. Ngaba singamantongomane? (Musa ukuphendula loo nto!) Enyanisweni, u-Oostie no-Arnie babhekana nabangamaqhina kabini, kwaye u-Oosterhuis wayinqoba amaxesha amabini. Kodwa ngakumbi ukuya kwinqanaba: Amaqela aseMerika i-Oostie ayejongene nawo ayomelele kakhulu - ii-rosters ezizaliswe ngeHolo-of-Famers ezayo. Kwakhona, izinga lokhuphiswano kufuneka luchaphazele indlela esibheka ngayo i-Oosterhuis 'engama-55.4 ekhulwini. Kwimeko yakhe, uphawu lubukeka lungcono kangangexesha.
U-Oosterhuis wadlala ii-Ryder Cups ezintandathu, imirhumo engama-28, kunye nerekhodi jikelele ye-14-11-3. Kodwa ku-singles apho ixabiso le-Oostie licacile. Waya ku-6-2-1 kuma-singles, engalahlekelwa yinto yakhe yokugqibela yeNdebe yeeNdebele (ezo ilahleko zaziza kuHubert Green noRaymond Floyd , iHolo leNkathazo ezayo ezimbini).
Kwiimidlalo zokuqala ezi-7 ze-Oostie, wambetha uGen Littler, wamxabela uArnold Palmer (kabini), u-Lee Trevino, wambetha uYohnny Miller , wamxabela uJC Snead waza wambetha uJerry McGee. Leyo yintsebenzo engaqhelekanga yokusebenza. (Ingxelo yakhe yokulahlekelwa yimpumelelo iqhutywe yi-0-3-0 kuboniswe kwiNdebe yakhe yokugqibela ngo-1981.)
U-Oosterhuis naye wabambisana noNick Faldo kwimpumelelo emibili kwi-Cup yokuqala ye-Cup ye-Faldo ngo-1977, ebetha u-Floyd / uLou Graham no-Floyd / uJack Nicklaus.
(ukhonkco) Seve Ballesteros noJose Maria Olazabal, eYurophu
UStephen Munday / Getty Izithombe
UJose Maria Olazabal ngokwenene unalo irekhodi engcono yezinto ezimbini - 18-8-5 (.661) ukuya kuSeve Ballesteros '20-12-5 (.608). Kwaye ngokumangalisayo - njengabo basekhaya baseSpeyin uGarcia - nabani na aba bantu babenalo rekodi efanelekileyo. U-Olazabal wayengu-2-4-1, uBalterteros 2-4-2.
Kodwa kufanelekile kuphela sibalula ndawonye ngokubambisana kwabo-intsebenziswano enkulu kwiimbali ze-Cup ye-Ryder - yiyiphi into ebabini kuloluhlu.
UBallesteros no-Olazabal babelana ngokuphindaphindiweyo ngamaxesha angama-15 baze balahleka kabini. Babene-11-2-2 kunye-i-Armada yaseSpain, babizwa-baza bafumana amaphupha angama-12 kwiqela labo. Zizo zithandathu iingongoma ngaphezu kweyiphi intsebenziswano ye-Cup ye-Ryder.
Ian Poulter, iqela laseYurophu
NjengoGarcia, uPoulter usasebenza kwaye udlalwa kumdlalo we-2014. Kwaye ngowokuqala ngowama-2014 kunye nerekodi elahlekelwayo: waya ku-0-1-2.
Kwaye kwenza irekhodi lakhe elipheleleyo 12-4-2, ipesenti ephumelelayo ye .722
Yaye wayigcina ingqungquthela yakhe engaphelelwanga yintlupheko ngokuhlula iWebb Simpson ngo-2014, eyenza ukuba ibe yimisebenzi engama-4-0-1. Kwiikhopu zangaphambili, iirekhodi zeWL zikaPoulter zaziquka iimpawu ezine-4-1-0, 3-1-0 kunye ne-4-0-0.
Tom Kite, i-Team USA
Nasi isimangalo sethu sokugqibela. Xa intetho ijika kwi-Ryder Cuppers enkulu, igama likaTom Kite lingaze lifike. Wayesicotha kwaye azinzileyo kuzo zonke iindawo zakhe ezide kunye nokuphumelela kwegalufa; akukho nto ebonayo, wahlala egcina i-plodding and gring (and winning). Ngoko irekhodi lakhe leNdebe ye-Ryder ilahlekelwa.
Kodwa kungekhona kuthi. I-Kite yayingu-15-9-4 kwi-career yayo ye-Ryder Cup, i-percentage winning ye-60.7. Le ngxelo yahlanganiswa namaqela aseYurophu ayefumana amandla kwaye ekugqibeleni aphule ngokumelene nokuncintisana kwabo eMelika.
I-Kite idlala kwiikhopu ezisixhenxe, iiminganiso ezingama-28, kodwa zingama-singles apho uKite ebonakala khona. Udlale imidlalo engama-7 kwaye akazange alahleke (5-0-2). Okokuthi, ngokuqinisekileyo, irekhodi ye-second-best singles kwi-History ye-Ryder Cup.
Ngamanye amaxesha wayedlala enkulu, naye. Ngomdlalo we-Ryder Cup ka-1989, i-Kite yashaya iWoward Clark 8-no-7, ibophelelwe yintlanzi enkulu yenkqubela kwixesha eli-18 le-Ryder elilinganayo. Ngowe-1979, uKite kunye nomlingani uHale Irwin watshaya uKhan Brown kunye no-Des Smyth-7 no-6, abophelelwe umda omkhulu wokunqoba kwixesha le-Ryder Cup.
ULunny Wadkins, i-Team USA
U-Lanny Wadkins uphonswa emva kokucima i-shot shot ngexesha le-1989 Ryder Cup. IWadkins yayingenye yezona zinto zilungileyo zeMelika Ryder Cuppers yesizukulwana sakhe. UDavid Cannon / Getty Images
U-Lanny Wadkins nguMerika obalaseleyo kwilisti zethu ngezizathu ezininzi: Ingxelo yakhe yonke, ephezulu kakhulu; into yokuba waqulunqa loo ngxelo kwixesha laseYurophu, kwaye ngokuyininzi iqhathanise namaqela aseYurophu ayekhuphisana kakhulu okanye aphumelele; kunye nenyaniso yokuba wayenayo irekhodi lokuphumelela kuzo zonke iifom ezintathu.
I-Wadkins yayingu-9-6-0 kwimigangatho emine, i-7-3-1 kuma-fourballs kunye ne-4-2-2 kuma-singles. Oko kwongeza ukuya kuma-20-11-3, i-rate ye-impumelelo engama-63.2%. Enyanisweni, iWadkins ingomnye wabantu baseMelika abavela kwixesha lakhe kunye nerekhodi yokuwina (ubuncinci beemidlalo ezili-15 ezidlalwayo).
I-Wadkins, njengeBallesteros yabaseYurophu, nayo yazisa umnqweno kwiNdebe ye-Ryder eyaphala kwiqela lakhe kunye nabalandeli.
UColin Montgomerie, iYurophu yeYurophu
JD Cuban / Getty Izithombe
Eqinisile: UColin Montgomerie ngumdlali omkhulu kakhulu we-Cup ye-Ryder. Amalungu amaqela aseU.SA ayesaba oku (abanye abalandeli baseYurophu, nabo: uMonty wayengumfanekiso ocebisayo nakwiindawo ezininzi zase-Continentals), kodwa akukho nto inokuphika indawo kaMontgomerie ekupheleni kwoluhlu lwethu.
UMontgomerie wadlala i-Ryder Cup ngamanqaku asibhozo, ama-36 ama-total matches, kwaye alahlekelwa zihlandlo ezithoba kuphela. Ingxelo yakhe yonke yayingu-20-9-7 (.653), kwaye yayiquka uphawu lwe-8-3-3 kwiimine ezine.
Ama-Singles yilapho uMonty ekhanya khona: Wadlala imidlalo engama-8 kwaye akazange alahleke Iinqununu ezithandathu, iinqunithi ezimbini, ukunqotshwa kwe-zero. Oko kuqukwa kwisiqingatha-mbono wecala ngokuchasene noMark Calcavecchia ngo-1991 emva koku-4-phantsi kunye nezimbobo ezine zokudlala; kuquka ukunqoba kukaLee Janzen, uBen Crenshaw , u- Payne Stewart , uScott Hoch noDavid Toms (kabini).
U-Montomgerie wadlala yonke imidlalo ye-Ryder ukususela ngo-1991 ukuya ku-2006, kwaye wayeyidwala eYurophu ezininzi zazo. Waphefumlela abadlali beqela lakhe, bephantsi kwesikhumba senkcaso (kwaye baqhubela abalandeli beenkcaso). Yona nto ibhetele kwiNdebe yeRyder.
2013 I-Solheim Cup: I-Hedwall epheleleyo iholele iYurophu ephezulu
2018 IShedyuli yoTyelelo lweLPGA
7 Iingqungquthela apho uArnold Palmer wayenempembelelo enkulu kwiGalofu
Ukuqhawula ibhola ngaphesheya kwamanzi ngomhla we-16 Hole kwi-National Augusta
I-AT & T ye-Pebble Beach National Pro-Am Golf Tournament
1959 I-Ryder Cup: I-Last of Its Kind
Ukwenza iPhepha ngokuphepha
Ibali leNguquko ka Nat Turner
Umbuzo womfundi: Ngaba i-petroli okanye i-kerosene iya kutshiswa kwi-injini ye-diesel?
3 Ixesha leMimoya liCishe linciphise okanye likhanselelwe i-Super Bowl
Iingcaphuno ezivela ku-Arthur Rimbaud's Surrealist Ukubhala
Ukubhukuda i-Stroke Length, I-Stroke Rate kunye noQeqesho lwe-Swimmer
I-Biographie yeNgqungquthela yeRob yeqela likaRhulumente
I-SHOP: I-Jackets zethu ezi-5 ezizithandayo ezivela kwi-Burton 2015-2016 Iqoqo labasetyhini
Indlela Yokuba Umphulaphuli Olungileyo
Inkcazelo yeQela leHyroxyl
Iimpawu zeTraracic Outlet Syndrome
I-Big Quiz kumazwi adibeneyo adibeneyo
LPGA Toto Japan Classic
Ukuhlaziywa kwe-Honda ST1300 ka-2012: iRight Rider
Indlela yokususa iPaint Road ukusuka kwiCar Yakho
Iintlobo zeNkcitho zeMveliso yasePropical Gross
Ukuba Uthanda i-Nickelback ... Hlola iiRaffers
Umgwebo Wokufa eUnited States
Amabhayisikobho e-Classic Classic ayenayo ibhokisi ye-Office Flops
Iingcebiso ezili-12 zokuphumelela kwiNyanga yeVirgo
Ubambe isiKhokelo sokuBuyelwa kwesiTsha se-Ostara